Olee otú Hichapụ Duplicates si iTunes Library | wepụ duplicates na iTunes
Olee otú Hichapụ Duplicates / Wepụ Duplicates na iTunes
Na-eche annoyed na ọtụtụ oyiri music, fim, pọdkastị, akwụkwọ, wdg na iTunes? The ibu gị iTunes ọba akwụkwọ bụ, na elu-ekwe omume na na ị nwetara tọn iTunes duplicates. Ndị a oyiri ọdịnaya eme ka gị na iTunes na a ọgbaghara, nke ị nwere ike amasị ọcha ha niile ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwọta idozi ya, ị ga-abịa nri ebe. Isiokwu a na-agwa gị otú ị wepụ duplicates na iTunes effortlessly.
Method 1. Hichapụ Duplicates na iTunes Iji aka
Method 2. Hichapụ oyiri Songs na iTunes na a-atọ ndị ọzọ Ngwá Ọrụ
NDỤMỌDỤ Iji gbochie oyiri iTunes ihe
iTunes enyere-egosi na ị duplicates na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ha na gị onwe gị. Ebe a bụ isi ọrụ eruba ka ihichapụ oyiri ihe si iTunes.
Uru: Free cons: Nani ihichapụ otu oyiri item na oge. Na-ewe oge.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na pịa Music, Movies, TV na-egosi, égwu, wdg n'okpuru Library. Cheta na: Ebe a, m na-oyiri Music mwepụ dị ka ihe atụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ oyiri fim, ngwa, TV na-egosi, wdg, ị nwekwara ike na-eso ụzọ.
Nzọụkwụ 2. Pịa View. Na esiri-ala menu, pịa Gosi oyiri ihe.
Nzọụkwụ 3. All oyiri songs egosi n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 4. Right pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa ihe oyiri song. Na esiri-ala menu, pịa Hichapụ. Na mmapụta dialog, pịa Hichapụ Song.
The usoro 1 bụ bara uru, mgbe i nwere ole na ole songs na iTunes. Otú ọ dị, ọ bụ bụghị ihe ezi uche mgbe ị na-otu narị otu narị nke oyiri songs. Na nke a, ị ga-mma ise nkwado site na ụfọdụ iTunes oyiri remover, dị ka Wondershare TunesGo (Win) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Nke a pụrụ ịtụkwasị obi iTunes oyiri remover na-enyere aka-ewepụ ihe niile oyiri songs na iTunes Library effortlessly.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụkwa software-arụ ọrụ maka Android. Ka ihichapụ iTunes oyiri songs, ị na-adịghị ga-enwe ihe gam akporo ngwaọrụ.
Quick na mfe iji
Wepụ niile oyiri songs na iTunes na oge.
Cons: bụghị free.
Easy iji esi wepụ oyiri songs na iTunes
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo na gị Mac ma ọ bụ PC.
Nzọụkwụ 2. Launch ya. iTunes ga-akpaghị aka oru. Ke akpan window, pịa Hichaa iTunes Library.
Nzọụkwụ 3. TunesGo ga-akpaghị aka na-achọpụta rụọ na-egosi na ị na n'ihi banyere oyiri songs na-efu music na mkpado ma cover. Gaa pịa Hichaa. Nzọụkwụ 4. A dialog Pop elu. Pịa Hichaa gosi ya na unu edinam. Mgbe ahụ, iTunes amalite iji wepụ oyiri songs na idozi efu music mkpado na-ekpuchi.
Iji nyere aka gbochie oyiri ihe na gị ọbá akwụkwọ, ị nwere ike abụọ nhọrọ na iTunes.
Nzọụkwụ 1. Open iTunes na pịa Dezie> Mmasị ...> Ebuliri elu.
Nzọụkwụ 2. Lelee abụọ nhọrọ: Nọgidenụ na iTunes Media nchekwa organzied ma ọ bụ Copy faịlụ ka iTunes Media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ
Ọ bụrụ na abụọ ndị a nhọrọ na-arụ ọrụ, mgbe ị na mbubata media gị iTunes Ọbá akwụkwọ, usoro mgbasa ozi na faịlụ a ga-depụtaghachiri gị iTunes nchekwa. Otú a, ị na-adịghị ekwe ka mbubata oyiri ihe oge ọzọ.
Best 4 iTunes Alternatives maka Android
Best 4 Alternaitves ka doubleTwist
Top 3 Alternatives ka iSyncr
Best 3 Alternaitves ka SyncMate
Best Alternative ka Android File Nyefee
Olee otú Tinye Lyrics ka iTunes Library na ogbe
Esi Track aha maka iTunes Library na ogbe
Otú nyefee iTunes Audio Akwụkwọ ka Android Devices
Olee Otú M Pụrụ Tinye sere My iTunes Library
Olee otú ị na mmekọrịta music si iTunes ka iPad
Otú nyefee Music & listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ka PC
> Resource> iTunes> Olee otú iji Hichapụ Duplicates si iTunes Library | Wepụ Duplicates